pvc celuka furo bhodhi Vagadziri & vanotengesa - China pvc celuka furo bhodhi fekitori
5mm Celuka PVC Furo Bhodhi
5mm celuka PVC furo bhodhi imhando yePVC Furo Bhodhi, iyo inogadzirwa neceluka maitiro uye inoumbwa kuburikidza neyakachenesa chikuva. Celuka PVC bhodhi ine yakati sandara, matt kutenderera pamusoro, ichiita kuti jira riwedzere, riwedzere uye nekudaro rinogara kwenguva refu.
8mm furo bhodhi PVC
8mm furo bhodhi pvc ndeye yakatarwa ye celuka pvc furo bhodhi, zvakare ndeyePVC furo bhodhi. Tora polyvinyl chloride seyakanyanya mbishi zvinhu, wedzera achipupira furo mumiririri, murazvo retardant uye anti-kukwegura mumiriri, uye tora yakakosha michina ye extrusion kuumbwa. Mavara akajairika machena uye matema.
Pepa rePVC 10mm
Tine fekitori yakazvimirira, izvo zvinoita kuti tive nyanzvi kwazvo mukugadzirwa kwe furo bhodhi.
12mm yakawedzera PVC furu pepa
Yakawedzerwa PVC furo bhodhi isingaremi, yakaoma PVC pepa iro rinoshandiswa kune akasiyana mafomu anosanganisira zviratidzo uye zvinoratidzwa, matembere ekuratidzira, kusimudzira mifananidzo, dhizaini yemukati, thermoforming, prototypes, kugadzirwa kwemhando, nezvimwe zvakawanda.
15mm Forex jira jena, rakakwenenzverwa zvishoma-rakavharwa-sero rakaomarara PVC sheet zvinhu zvine rakanyatsonaka uye rakafanana sero chimiro uye silky matt huso. Forex jira iri ine akanakisa echimakanika zvivakwa uye yepamusoro-giredhi pamusoro pehunhu.
18mm yakawedzera PVC bhodhi
18mm yakawedzera PVC bhodhi inonzi zvakare chena PVC furo bhodhi uye PVC furo bhodhi fenicha, imwe yePVC furo bhodhi kana PVC furo jira.
25mm celuka bhodhi
Iyo 25mm furo bhodhi ndeyeye celuka bhodhi, mune 1-30 mm PVC furo bhodhi ndeye bhodhi gobvu, saka iri rakakora bhodhi rakakodzera fanicha, kuvaka, kushongedza uye zviitiko zvekunze.
20mm PVC furo bhodhi fenicha
pvc celuka furo bhodhi iri rakanyanya kushandiswa muFenicha Indasitiri, Kushambadzira Indasitiri uye Yemukati & Kunze Kunyorera.